WOWOW 8 လက်မကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet Brushed Nickel
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW 8 လက်မကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet Brushed Nickel
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.955ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 20 ဖောက်သည် ratings
လက်ကိုင်နှစ်ခုကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet သည်သီးခြားရေပူနှင့်ရေအေးပြောင်းရန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ရေချိုးခန်းအလှဆင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2320300 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
နိုင်ငံတစ်ခုရွေးပါ အော်လန်ကျွန်းစုအာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်Belauဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားBonaire, စိန့် Eustatius နှင့်ဆာဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂို (ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ)ကွန်ဂို (ကင်ရှာဆာ)ကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာခရိုအေးရှားကျူးဘားရူရာဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစုဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီအိုင်ဗရီကို့စ်ဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesiaမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ကိုရီးယားမြောက်အမေရိကမက်ဆီဒိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကိုပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါဆောပိုလိုဆောင်ထမေကျောင်းအုပ်ကြီးစိန့်ဘာသယ်လဲမီစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်မာတင် (ဒတ်ချ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာ / Sandwich ကကျွန်းစုေတာင္ကုိးရီးယားတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံအရှေ့တီမောတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ဗြိတိန်)ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်)ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) မိုင်းနားပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)Virgin Islands (ယူအက်စ်)Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
ရေချိုးခန်း faucet သည်ကျယ်ပြန့်သော nickel 2320300 ကို brushed
သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်း faucet ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်၏ရေချိုးခန်းထဲမှာအရေးအပါဆုံးပစ္စည်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းကိုသင်သိသလား သူတို့သည်သေးငယ်သော်ပင် faucets များသည်သင်၏ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းကိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ရေချိုးခန်း faucets သည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းတွင်မဆိုသဘာ ၀ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ် ဦး သည်ရေချိုးခန်းထဲသို့ ၀ င်သောအခါသူအာရုံစိုက်မိသောအရာများသည်ရေချိုးခန်း faucets ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေချိုးခန်း faucet သည်မည်သည့်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းကိုမဆိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပြီးပညာရှိစွာရွေးချယ်သင့်သည်။
ဤအချက်ကသင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်း faucet ကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ရမည်ကိုပြသသည်။ သင့်ရေချိုးခန်းအသစ်အတွက်သင့်အနေဖြင့် (အကန့်အသတ်ဖြင့်) ဘတ်ဂျက်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုးခန်း faucets များကိုကန ဦး ဒီဇိုင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်တွင်မထည့်သွင်းပါ။ ရေချိုးခန်း faucets ကိုမကြာခဏဖြစ်စဉ်၏အဆုံးတွင်သာရွေးချယ်သည်၊ ရေချိုးခန်းကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏ဒီဇိုင်း ဦး စားပေးနှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်နှစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောရေချိုးခန်း faucet ကိုရှာရန်မှာအတော်လေးစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်ရေချိုးခန်းဘတ်ဂျက်များသည်အဆုံးတွင်ကုန်ဆုံးသွားသည်၊ သင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့်သင်၏ရေချိုးခန်း faucets ကိုရွေးချယ်ရန်အလျှော့မပေးလိုပါ အထူးသဖြင့်သင်ဤရေချိုးခန်း faucets သည်သင်၏ရေချိုးခန်းအကန့်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်သိသောအခါ။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောစတိုင်ကျလှပသောရေချိုးခန်း faucets များကိုသင်ပေးသည်ကိုသိရခြင်းကကောင်းသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် WOWOW သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောငွေကိုပေးသည်။
အစိုင်အခဲသတ္တုရေချိုးခန်း faucet နီကယ်ကျယ်ပြန့် brushed
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet brushed nickel ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရေချိုးခန်း faucet ကိုသင်၏လက်၌ကိုင်ထားသောအခါသင်ချက်ချင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ရေချိုးခန်း faucet တွင်အလေးချိန် ၃.၈ ပေါင်ထိရှိပြီးနီကယ်သည်သံသယမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုဖော်ပြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံမည့်အရည်အသွေးမြင့်သောရေချိုးခန်းဆေးကြောခြင်းကိုသင်သေချာစွာသိနိုင်သည်။ ကျိန်းသေသည်, အစိုင်အခဲကြေးဝါပစ္စည်းများသည်အခြားသတ္တုများထက်ဝေးသာ။ ကောင်း၏။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောသတ္တုပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်ခြစားမှုပြproblemsနာများအတွက်သင်လုံး ၀ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးစေသည်။ သင်၏ရေအရည်အသွေးသည်ခဲမပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ရေချိုးခန်း faucet သည် brushed nickel ၏ကျယ်ပြန့်သော brushed nickel မျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြီးခဲ့သည်။ ဒီပန်းချီကားကသင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းကိုလှပသောထိတွေ့မှုပေးရုံသာမကဘဲခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ Brushed nickel finish သည်အစိုဓာတ်နှင့်ခြစ်ရာများကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေချိုးခန်း faucet က nickel ကိုခြစ်ရာများနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိသော့ချက်ကျသောဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအထည်ဖြင့်သုတ်ခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။ ရိုးရှင်းပါသည်။
ရဲရင့်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်ထားသောရေပူရေအေးပမာဏကိုသီးခြားချိန်ညှိရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောလက်ကိုင်နှစ်ခုကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucet ပါရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းကိုလည်း4မှ 16 လက်မကနေချိန်ညှိသည်။ faucet သည်အပေါက်သုံးပေါက်သာလိုအပ်ပြီးတပ်ဆင်မည့်အကွာအဝေးကိုသင်၏အကြိုက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
မြင့်မားသောစတုရန်းနှိုက်သည်စျေးကွက်ထဲတွင်တွေ့နိုင်သောအခြားရေချိုးခန်းဆေးတံများတွင်မတွေ့နိုင်သောထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အတော်များများကရေချိုးခန်း faucets အတော်လေးဆင်တူကြည့်ရှုပါ။ faucets နှင့်ပတ်သက်။ အထူးအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရဲရင့်သောဒီဇိုင်းအပြင်ရေချိုးခန်း faucet ၏မြင့်မားသောနဂိုအတိုင်းဖြစ်သော nickel ၏ကျယ်ပြန့်သော brushed bracelet သည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤထူးခြားသောစတုရန်းပုံသဏ္shapedာန်ရေချိုးခန်း faucet သည်သင့်အားခေတ်မီအင်္ဂါရပ်နှင့်နှစ်သိမ့်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုပေးသည် လက်တွေ့အားဖြင့်တော့ရေစီးဆင်းမှုကိုရောက်ဖို့သင့်လက်ကိုဆန့်ရန်မလိုပါ။ ဒါကအဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးစေသည်။
အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည့်ရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိသည်
ဤအဆင်ပြေသောရေချိုးခန်း faucet ၏လက်ကိုင် ၂ ခုကသင့်အားအသံပမာဏနှင့်ရေအပူချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ကိုင် ၂ ခုသည်အစိုင်အခဲသွပ်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလွယ်ကူပြီးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ရေချိုးခန်း faucet ကိုအသုံးပြုထားသောနီကယ်အနှံ့အပြားကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရုံသာမကရေမြှုပ်ကိုယ်တိုင် ၃၆၀ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ရေချိုးခန်းအ ၀ တ်အထည်ကိုသင့်အားအဆင်ပြေသောနေရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပြီး၎င်းကိုနောက်ကျောဘက်သို့လှည့်နိုင်သည်။ ဒါကဥပမာအားဖြင့်သင့်ရေချိုးခန်းစုပ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူစေသည်။
လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည့်အပြင်ကျယ်ဝန်းသောနီကယ်ကိုအသုံးပြုထားသောရေချိုးခန်း faucet ကိုလည်းအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏တီထွင်မှုမြန်လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်မှုအင်္ဂါရပ်သည်စျေးကွက်တွင်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်စေသည်။ ရေပူနှင့်ရေအေးအေးများကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောပိုက်ဖြင့်ရောနှောထားသည်။ ဤတိကျသောနည်းစနစ်ဖြင့်သင်၏ရေပိုက်များကွဲမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါသည်။ ရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောကြောင့်စျေးကြီးသောရေပိုက်သမားမရှိဘဲတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
အာမခံချက်ပေးသောရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်
ရေချိုးခန်းတွင်သယ်ဆောင်ထားသောနီကယ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ မြင့်မားသောစတုရန်းနှင်နှင့်၎င်း၏လက်ကိုင် ၂ ခုအပြင်ရေလမ်းကြောင်း၊ ရေအေးနှင့်ရေပူအတွက် ၅၀ စင်တီမီတာရှိသောရေပိုက်များ၊ ၁ ခုပေါ်ရှိ strain အဆို့တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများပါရှိသည်။
WOWOW သည်၎င်းကိုငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးပေးသည်ဟုအာမခံထားသဖြင့်ရေချိုးခန်း faucet သည် brickel nickel ကိုကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်ထားခြင်းကြောင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရသောအာမခံချက်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ သင်ရရှိသောငွေတန်ဖိုးနှင့်သင်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါကရေချိုးခန်း faucet brushed nickel ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်ပို့နိုင်သည်။ သင့်အားမေးခွန်းများမေးစရာမလိုဘဲအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေကိုသင်အာမခံထားသည်။ ထို့အပြင်၊ WOWOW ကသင့်အား ၃ နှစ်အာမခံကာလပေးထားသည်။ သင်၏ရေချိုးခန်း faucet သည်နီကယ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းမရှိပါကသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက WOWOW သည်သင်၏ရေချိုးခန်း faucet ကိုအသစ်စက်စက်ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။ WOWOW သည်ယင်း၏တာ ၀ န်ကိုအလေးအနက်ထားသည်။
ရေချိုးခန်း faucet ၏အားသာချက်များမှာ nickel ကို brushed in the nutsllll တွင်:
•ထူးခြားသော ၇- ပုံဒီဇိုင်း
SKU: 2320300 Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: ၂ လက်ကိုင်, brushed နီကယ်
11.2 x ကို 10.1 x ကို 3.2 လက်မ
ကြေးဝါ / သံမဏိ / သွပ်အလွိုင်း
ရေပူ / ရေအေး
Z ကို *** တစ်ဦး2020-04-28
စျေးနှုန်းအဘို့ကြီးသောတန်ဖိုး။ ကုန်ကျစရိတ်အပိုင်းအစ။ ကြည့်ကောင်းပါတယ် လက်ကိုင်အပေါ်အရေးယူချောမွေ့ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရန်မှာ spout သည်လှည့ ်၍ မရနိုင်ပါ။ ငါအထူးသုတေသနမပြုခဲ့တာကပြaနာမဟုတ်ဘူး၊ ငါအစားထိုးလိုက်တာကအဲဒီအင်္ဂါရပ်ရှိတယ်။
ကို C *** t ကို2020-05-01
တပ်ဆင်ရန်စူပါလွယ်ကူသည်။ ထောက်ပံ့ရေးကျဆင်းမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် supply line ကိုချိတ်ဆက်သောအခါသတိထားပါ။ သူတို့ကိုအတူတူတင်းကျပ်ရန်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှစ်ခုသုံးပါ။ ထက်အခြားအလွန်ကောင်းတဲ့ faucet ။ ဝယ်ယူရကျိုးနပ်!
W *** င2020-05-03
ငါတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါ့ရေချိုးခန်း faucet ဘို့ဤရွေးချယ်ရာတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအမြင့်နှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုကြိုက်သည်၊ ၎င်းကိုယခုတစ်လနီးပါးတပ်ဆင်ထားပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါကပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုလိမ့်မယ်
T က *** s ကို2020-05-03
လာမည့်လတွင်စျေးကွက်တင်ရန်ငှားရမ်းထားသောအိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ပြုပြင်နေပြီ။ ကျနော်တို့ဒေသခံသေတ္တာစတိုးဆိုင်ကြီးမှာရေချိုးခန်းအိတ်တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရေပိုက်တွေအရမ်းများလွန်းတယ် ငါသူတို့ကိုအမေဇုန်မှာစစ်ဆေးပြီးဒီတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်းအတွက်ဂရိတ်ရှာဖွေနေ faucet ။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။
D *** ဎ2020-05-07
ဤသည်ဝေးအားဖြင့်စျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံး faucet ပါ! ၎င်းသည်သတ္တုအားလုံးဖြစ်ပြီးသတ္တုလုံးတွန်းအားပေးသည့်နှင့်ရေကန်တစ်ကန်နှင့်အတူယိုစီးကျနေသောရေနုတ်မြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်ဆံပင်၏ပိုက်ပိတ်ဆို့သန့်ရှင်းရေးမရှိတော့!
ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်လိုအားကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ လျင်မြန်စွာ delivery..easy တပ်ဆင်။ Home Depot တွင်နှစ်ဆပေးရသည့်အရည်အသွေးနှင့်တူညီသည်။ သင်၏ငွေအတွက်တန်ဖိုးအားလုံးရယူပါ။ ငါ၏အဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအလွန်အမင်းပျော်ရွှင်။
ကို C *** င2020-05-09
ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်ဒါငါဒီ faucet ကိုရှာဖွေအွန်လိုင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့သေတ္တာဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးများမှာသင်တွေ့ရတဲ့ဈေးနှုန်းထက်နည်းနည်းသက်သာတဲ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နေသလောက်ဘာမှမစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါလှတယ်။ ကျိန်းသေဒီအမှတ်တံဆိပ်ကနေနောက်တဖန်ဝယ်ယူလိမ့်မယ်။
B က *** င2020-05-13
တကယ်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးနှင့်စတိုင်လ်။ Home Depot မှရရှိသောကျွန်ုပ်၏အခြား faucets များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအရည်အသွေးသည် ၀ ယ်ယူရန်အလွန်မြင့်မားသော်လည်းစျေးနှုန်းတစ်ဝက်သာရှိပါသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာငါ့အဆွေခင်ပွန်းမှအကြံပြုခဲ့သည်
B က *** င2020-05-16
အဆိုပါ faucet ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောရေစုပ်စက်အတွက်အချိန်ကြာကြာမသုံးရန် မှလွဲ၍ တပ်ဆင်ခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။ ကြည့်ရတာနဲ့အနည်းဆုံးပေးရတဲ့စျေးနှုန်းထက်နှစ်ဆရှိတယ်။ အဆိုပါ faucet လှပသောထုပ်ပိုးခဲ့သည်သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်သေးပေမယ့်အရာအားလုံးကိုပိုကောင်းတဲ့လုပ်လေ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
တစ်ဦးက *** r2020-05-17
ပေါ်မှာထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထိုအပင်သေတ္တာထဲမှာပြီးသားလက်အိတ်ရှိသည်။ တစ်နာရီကြာမှအဟောင်းကိုဖယ်လိုက်တယ် ။( ။ ပြီးတော့ ၁၅ မိနစ်ကအသစ်တစ်ခုကိုဝတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကရေပိုက်သမားမဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာအရမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသိသာသာထင်ရှားနေတယ်။ အမှားမလုပ်နိုင်ဘူး။
: D *** y က2020-05-19
အဆိုပါ faucet နှင့်လက်ကိုင်ခြစ်ရာမှကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်စွာပတ်ရစ်လာကြ၏။ faucet နှင့်လက်ကိုင်နှစ်ခုလုံးကိုကြာရှည်ခံစေရန်ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျဉ်းကြောင်းများသည်သတ္တုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအစုကိုအဓိကချို့ယွင်းချက်တစ်ခုအတွက်ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ ယိုစီးမှုသည်ကြီးမားပြီးစံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားရှိသောယိုပေါက်တစ်ခုအတွက်ကြီးမားလွန်းသည်။ ယိုစီးသည့်အဆို့ကိုပေါ့ပါးသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသတ္တုမဟုတ်ပါ။
K သည် *** ဃ2020-05-20
ကျွန်ုပ်၏ကောင်လေးသည်ဤအရာအလုံးစုံကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုသောအခါသူသည်ဒေါသထွက်ပြီးကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် faucet ကိုသူတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် faucet ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူကိုချီးမွမ်းပြီးရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းအားလုံးအဘယ်ကြောင့်မကောင်းကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါဒီ faucet ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဝမ်းသာပါတယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအပြင်, ငါကလှပသည်ထင်။ ဒီဟာကငါရှာနေတဲ့ပုံစံပဲ။
R ကို *** ဎ2020-05-21
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်အားကျွန်ုပ်တို့၏ faucet စနစ်ဟောင်းအတွက်အစားထိုးအဖြစ် ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီး၊ ဤထုတ်ကုန်သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကျော်လွန်ပြီးပြည့်စုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော့ရှင်းသည့်အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အလှဆင်မှု / ဆောင်ပုဒ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီ faucet ဟာကြည့်ကောင်းရုံသာမကအရမ်းချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးကောင်းမွန်သောရေစီးဆင်းမှုရှိသည်။ ငါဘယ်သူမှအကူအညီမပါဘဲမိနစ် ၂၀ အတွင်းဤစနစ်ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်အားစျေးကွက်ရှိမည်သူမဆိုအားသူတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်အပေါက်တစ်ပေါက်ထည့်ထားခြင်းမရှိသောခေတ်ပြိုင်စုပ်ယူရန်အတွက်အကြံပေးလိုပါသည်။
R ကို *** s ကို2020-05-25
ကိုယ့်စူပါအလွန်အကျွံ hans grohe (စာလုံးပေါင်း) faucet ဒီယူနစ်နှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ 15 မိနစ်အတွင်း installed ။ စူပါချောမွေ့ကောင်းတဲ့အဆို့ရှင်အရေးယူ။ ဒီဇိုင်းသည်ကျောက်ပြားပေါ်ရှိလက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုစသည်တို့ကိုကာကွယ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အလွန်တန်ဖိုး။ ကိုယ့်အစားထိုးအခြား faucet ဒီတစ်ခု၏စျေးနှုန်း 5x ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်ဆောက်သူတစ်ယောက်၊ ပြီးတော့ ၁၀၀ faucets တပ်ထားတယ်။ ရွှင်လန်း!
: P *** ဌ2020-05-28
ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်နေသည်။ အရောင်နှင့်စတိုင်ကျလှသည်။ သို့သော်ရေပူ faucet သည်အလွယ်တကူလှည့်နိုင်ပြီးဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေပူ faucet အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်သေတ္တာထဲတွင်ရှိနေပြီးသင့်တော်သောအဝတ်လျှော်များရှိပြီးကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေပူနှင့်ရေအေးလက်ကိုင်တစ်ခုစီအတွက်အကာအကွယ်ယူနစ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသဖြင့်ချိန်ညှိ။ မရပါ။ ဒါဟာထုတ်လုပ်မှုချွတ်ယွင်းသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ရေအေးကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကရေပူကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါအရမ်းတင်းကျပ်ပြီး squeaks ပြီးတော့ရေပူက faucet ထဲကထွက်လာတာကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
D *** ဎ2020-06-03
ငါ့အချည်းနှီးနှင့်ဤ faucet ပြသခဲ့သည်တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာခြားနားချက်ပါတကား! အလွန်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးပြီးပြည့်စုံသောတပ်ဆင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အတွက်သင့်လျော်သောဆပ်ပြာနှင့်ဆေးကြောသန့်စင်သောအဝတ်အစားကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ လက်ကိုင်များအတွက်အခြေခံအဖုံးများတပ်ဆင်ရန်ကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ စုဆောင်းထားသည့်အုတ်များကို (သန့်ရှင်းသောသွားတိုက်တံ) လုံးဝမသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်အဖုံးများကိုရုပ်သိမ်းရသည့်အတွက်ကောင်းသည်။ အရမ်းကြီးစျေးနှုန်း! ကောင်းပြီ! ငါကျိန်းသေအနာဂတ်ဝယ်ယူဘို့ပြန်လာလိမ့်မယ်!
M က *** y က2020-06-05
ပစ္စည်းကအရမ်းကောင်းတယ်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ faucets တစ်ခုအားမှန်ကန်စွာမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုသင်ဖွင့်တိုင်းပိတ်ချိန်တိုင်းကြိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အချို့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပြင်ပေါ်ပေါက်ရေနုတ်မြောင်းသည်ရေကိုအလျင်အမြန်စီးဆင်းစေရန်ခွင့်ပြုချက်မလုံလောက်ပါ။
အရည်အသွေးကောင်းပုံရသောအလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှု faucet ။ ငါတို့အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါတို့သခင်ရေချိုးခန်းအတွက်နောက်ထပ် ၂ ထပ်ပေးတယ်။
J ကို *** ဃ2020-06-08
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောပုံနှင့်အမြန်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်။ ကြည့်ကောင်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ *** ဎ2020-06-12
ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်! တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးစတိုင်ကျစွာကျွန်ုပ်တို့၏ guest ည့်သည်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။ ၎င်းသည်ဒေသခံ hardware ဆိုင်များတွင်တွေ့ရသောမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုစတိုင်ကျပြီးစျေးနှုန်းမှာအလွန်များပြားသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) ဒေါ်လာစျေး